နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ကျိန်စာသင့်ဖူးစာ
Very good. Another Romeo and Juliet. But better.
blogger အကြောင်း Tag ပုို့စ် ရေးထားတဲ့ ပို့်စ်ကနေ ဒီ "ကျိန်စာသင့်ဖူးစာ" ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေး ဖတ်သွားတယ်။ ဆုတောင်းလေး တစ်ခုက ဘ၀များစွာထိ သက်ရောက်တာပဲနော်။